झलनाथको टिप्पणी : सरकारले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ, राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक छ (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
झलनाथको टिप्पणी : सरकारले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ, राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक छ (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २६ असोज । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अहिले देशकासामू धेरैखालको समस्या रहेको विद्यमान रहेको सुनाए । यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको बेथितिलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले सरकारले जनताका आवाजलाई सुन्नुपर्नेपनि बताए । उनले भने, म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, जनताका समस्या सुन्नुहोस । हामीले सरकार सञ्चालनको लागि कार्यक्रम बनाएका छौं । त्यसैले सरकारले जनतालाई समाधान दिनको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूहरुको कुरा सुनेको पनि सुनाए । यद्धपी कतिपय कुरा सुन्नेमा प्रधानमन्त्रीबाट समस्या पनि होला भन्ने खनालको टिप्पणी छ ।
उनले आफूहरुले के गर्दा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ? र विकास गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा सहमत भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकार सञ्चालनको लागि राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक रहको सुनाए ।